AppleiWatch (MJ2T2) Silver Aluminum Case with White Sport Band – 38mm | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
ပစ္စည်းအမျိုးအစား အားလုံး Kaymu စတိုး Kaymu ဖက်ရှင် Kaymu အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး Kaymu ဖုန်းများ Kaymu တက်ဘလက်များ Kaymu ကွန်ပြူတာများ Kaymu ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Kaymu ကင်မရာများ Kaymu ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ Kaymu အိမ်သုံးပစ္စည်းများ Kaymu စားသောက်ကုန်များ Kaymu ကားပစ္စည်းများ Kaymu အားကစားပစ္စည်းများ Kaymu ကလေးများအတွက် Kaymu ဘာသာရေးပစ္စည်းများ ဖက်ရှင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ညအိပ်ဝတ်စုံများ အသုံးအဆောင်များ အမျိုးသားများ အတွက် အ၀တ်အစား ဖိနပ်များ အတွင်းခံနှင့်ခြေအိတ်များ အသုံးအဆောင်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသား) ဂျင်းဘောင်းဘီများ ရှပ်များ နာရီများ အိတ်များ ခေတ်ပေါ်ဖက်ရှင်များ(အမျိုးသမီး) ဂါဝန်များ အိတ်များ နာရီများ လက်ဝတ်ရတနာများ TOP BRANDS TIMBERLAND NICHII OUTDOOR PRODUCTS COZY CORNER SPRINGFIELD YANGOODS အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး ရေမွှေးများ အမျိုးသမီးသုံး အမျိုးသားသုံး မိတ်ကပ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းများ အလှပြင် ပစ္စည်းများ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းများ မျက်နှာအတွက် ကိုယ်ခန္ဒာအတွက် အလှအပရေးရာ စက်များ လက်သည်းအလှအပ ခြေ/လက်အလှအပ လက်သည်းနီ/ခြေသည်းနီများ ဆံကေသာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု ခေါင်းလျှော်ရည် နှင့် ပျော့ဆေးများ ဆံကေသာသုံး ပစ္စည်းများ အမျိုးသားများအတွက် အသားအရေအတွက် မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်များ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆေးဝါးမျိုးစုံ ကျန်းမာရေးအတွက် ကိရိယာများ ဖြည့်စွက်ဆေးများ Top Brands MAYBELLINE YVES ROCHER MA'SURI POND'S ဖုန်းများ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများ စမတ်ဖုန်းများ ခလုတ်ဖုန်းများ ကြိုးဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်များ စမတ်နာရီများ နားကြပ်များ စပီကာများ မမ်မိုရီကတ်များ ဖုန်းမျက်နှာပြင်အကာ ဖုန်းအားသွင်းကြိုးများ ဖုန်းအိတ်နှင့်ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ပါဝါဘန့်များ TOP BRANDS SAMSUNG XIAOMI APPLE SONY HUAWEI LENOVO တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ တက်ဘလက်များ (၈"အောက်) တက်ဘလက်များ (၈"နှင့်အထက်) ၀ိုင်ဖိုင်ကွန်ယက် ဖုန်းကွန်ယက် iPadများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကာဗာများ ဘလူးတုသ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ အခြားပစ္စည်းများ TOP BRANDS APPLE SAMSUNG XIAOMI ACER WAINFORD ကွန်ပြူတာများ လက်ပတော့ပ် များ နုတ်ဘုတ်များ Macbook များ ပရင်တာနှင့်စကန်နာများ ဘက်စုံသုံးပရင်တာများ လေဆာပရင်တာများ ရုံးသုံးပရင်တာများ ဟာ့ဒစ်စ်နှင့်မန်မိုရီကဒ်များ ဟာ့ဒစ်စ်များ မမ်မိုရီကဒ်များ မမ်မိုရီ စတစ်များ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ လက်ပတော့ပစ္စည်းများ နားကြပ်နှင့် စပီကာများ ကီးဘုတ်များ ဒီဗီဒီစက်များ နက်ဝေါ့ပစ္စည်းများ ပရောဂျက်တာများ အခြားပစ္စည်းများ မောက်စ် ဆော့ဖ်ဝဲလ်များ ကာဗာနှင့်အိတ်များ ဘတ်ထရီ နှင့် အားသွင်းကြိုးများ ကေဘယ်လ် ကြိုးများ ဒက်စတော့်ပ်နှင့်မော်နီတာများ All-in-ones တာဝါများ မော်နီတာများ TOP BRANDS Acer HP Asus ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ အိမ်သုံးဂိမ်းစက်များ အိတ်ဆောင်ဂိမ်းစက်များ ဂိမ်းစက်တွဲဖက်ပစ္စည်းများ ဂိမ်းခွေများ Playstation ဂိမ်းခွေများ Xbox ဂိမ်းစက်နှင့်ဂိမ်းခွေများ Nintendo Wii ဂိမ်းခွေများ Nintendo DS ဂိမ်းခွေများ အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကင်မရာများ ကင်မရာများ ဒီဂျစ်တယ် ကင်မရာများ ပိုလာရွိုက်ကင်မရာများ ဗီဒီရိုကင်မရာများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ မမ်မိုရီကဒ်များ ဆယ်လ်ဖီစတစ်များ ဖျော်ဖြေရေးစက်ပစ္စည်းများ တီဗီများ LED တီဗီများ စမတ်တီဗီများ Plasma တီဗီများ Blu Ray နှင့် DVD စက်များ DVD Players Blu Ray Players iPod နှင့် MP3 များ နားကြပ်များ MP3 နှင့် အသံဖမ်းစက်များ စပီကာနှင့်အသံချဲ့စက်အသေးများ တီဗီ၊ဗီဒီယိုနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ 3D မျက်မှန်နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းရုပ်ရှင်စနစ်များ စပီကာစနစ်များ စပီကာများ စပီကာများ ဒီဂျေ နှင့် ကာရာအိုကေ Hi-Fi စနစ် ကားဂျီပီအက်စ်နှင့်အသံစနစ်များ ကားတွင်းသုံးတီဗီများ TOP BRANDS Samsung Panasonic Philips Sony JVC အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ အိမ်သုံးပစ္စည်းအကြီးများ ရေခဲသေတ္တာနှင့်ရေခဲစက်များ ပန်ကာများ လေအေးပေးစက် အ၀တ်လျှော်စက် အိမ်သုံးပစ္စည်းအသေးများ ဖုန်စုပ်စက်များ မီးပူ ရေနွးအိုးနှင့်ရေပူပေးစက်များ လေသန့်စင်ပေးစက် ရေပူ၊ရေအေးစက် အ၀တ်အထည်ထိန်းသိမ်းမှု ရေသန့်စက်များ လျှပ်စစ်မီးများ မီးဖိုချောင်သုံးစက်ပစ္စည်းများ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ ထမင်းပေါင်းအိုး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖို ဟင်းချက်ပစ္စည်းများ ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိပ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းများ အိမ်နှင့်အလှဆင်ပစ္စည်းများ အိမ်ပြင်ပသုံးစက်ကိရိယာများ အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများ ပရိဘောဂများ အိမ်သုံး ရုံးသုံး TOP BRANDS Samsung New World Hisense ရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဂဏန်းပေါင်းစက်များ စက်ကိရိယာများ စားသောက်ကုန်များ စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်များ စားသောက်ကုန်များ အချိုရည်များ ၀ိုင်နှင့်ယမကာများ အခြား အကြောင်းအရာကဏ္ဍများ ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်သုံးပစ္စည်းများ ပွဲများနှင့်လက်မှတ်များ ကလေးများအတွက် အသုံးအဆောင်များ စာအုပ် နှင့် စာရေးကိရိယာများ အားကစားပစ္စည်းများ ဈေးဝယ်လှည်း အကူအညီ လိုအပ်လျှင် Login ပင်မစာမျက်နှာ ဖုန်းများ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ စမတ်နာရီများ Apple iWatch (MJ2T2) Silver Aluminum Case with White Sport Band – 38mm Apple iWatch (MJ2T2) Silver Aluminum Case with White Sport Band – 38mmBy Apple (8) သုံးသပ်ချက် ရေးရန် > အသေးစိတ် ကြည့်ရှုရန် အဓိက အကြောင်းအရာများDimensions: 38.6 x 33.3 x 10.5 mm (1.52 x 1.31 x 0.41 in)Build: Stainless SteelSIM: NoIPX7 certified - water resistant up to 1 meter and 30 minutesDisplay Type: AMOLED capacitive touchscreen, 16M colorsSize: 1.5 inches (~55.1% screen-to-body ratio) Ks 365,000 ယခု ၀ယ်ယူရန် မှတ်ထားရန် ရောင်းချသူ Smart Connect ပစ္စည်းပို့ရန် ကြာချိန်2-4ရက် ရုံးဖွင့်ရက်အတွင်း ပို့ပေးပါသည်။
သင်္ကြန်ပိတ်ရက်ကြောင့်ပို့ဆောင်ချိန်ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းရောက် ငွေချေစနစ် ၇ရက်အတွင်း အခမဲ့ပြန်ပို့နိုင်မှု အသေးစိတ်ကြည့်ရန် : Return Policy ကုန်ပစ္စည်း စစ်မှန်မှု သုံးသပ်ချက်များဖော်ပြချက်အညွှန်းအချက်အလက်များဝယ်ပြီးပစ္စည်း ပြန်ပို့ခြင်း/ပြန်လဲခြင်း5မှတ် (7)4 မှတ် (1)3 မှတ် (0)2 မှတ် (0)1 မှတ် (0)
ပျမ်းမျှအမှတ်ပေးချက် 4,98 နှုန်းအား အခြေခံ၍ ဤကုန်ပစ္စည်းအား သင်ယခင်က သုံးစွဲဖူးပါသလား?5432 1 သုံးသပ်ချက် ရေးရန် အမျိုးအစား ခွဲခြားရန် ပြုလုပ်သည့် နေ့စွဲ အမှတ်ပေးချက်အများဆုံး အဆိုးဆုံး အဆင့်သတ်မှတ်ချက် မှတ်ချက်အားလုံးမေမျိုးသူ2016 ဇူလိုငျ 25 Apple ကိုအရမ်းကြိုက်ပါတယ်memory8GB ပါတော့ သုံးရတာပိုအဆင်ပြေတယ်
နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်မင်းမြတ်2016 မေ 25 လုံးဝကြိုက်တယ်။Apple iwatch လေးကပြောစရာမလိုအောင် အထာကျတယ်။ ဒီဇိုင်းလဲမိုက်တယ်။ သုံးလို့လဲအရမ်းကောင်းတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Min Khant Phyo Aung2016 မေ 25 iwatch iwatch က ရေလည်မိုက်ပါတယ်။ ရေစိုခံပြီး လုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်း အရမ်းမြင့်မားပါတယ်။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်louis han2016 မေ 25 Apple watchWoww, Best product with best price.
awesome... နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်Lily2016 မေ 25 superbThe Apple Watch is superbly designed and isacut above any other smartwatch currently available. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန် တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် အရာအားလုံးကို တွေ့မြင်နိုင်ခြင်းApple နာရီဖြင့် Notification များကို ချက်ချင်းတွေ့မြင်ပြီး တုံ့ပြန်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် Apple နာရီက ကူညီပေးမှာပါ။ သေသပ်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော Apple နာရီသည် သင်၏နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကို လုံးဝပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။အရေးကြီးသော notification များအား လုံးဝ လွတ်မသွားခြင်းApple နာရီအား သင့်လက်မှာပတ်ထားသည့်အချိန်တိုင်းတွင် notification များကို အဆင်ပြေလွယ်ကူစွာ ချက်ချင်းလက်ငင်း လက်ခံရရှိနိုင်မှာပါ။ သင့်အတွက်အရေးကြီးသော မတ်ဆေ့ခ်ျဝင်လာသည့်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်နှစ်သက်သော app များမှ notification ပို့လိုက်သည့်အခါပဲဖြစ်ဖြစ် သင်သတိထားမိအောင် Apple နာရီမှ အချက်ပြပေးမှာ ဖြစ်သောကြောင့် အချိန်မရွေး နေရာမရွေး ချောမွေ့မြန်ဆန်စွာ တုံ့ပြန်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်သည်။ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး တက်ကြွလှုပ်ရှားသော ခန္ဓာကိုယ်အား ပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါApple နာရီသည် သင် တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း နှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို တိုင်းတာပေးနိုင်သည့်အတွက် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းပေးထားနိုင်မှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။သင်နှင့်လိုက်ဖက်သောစတိုင်အား ရွေးချယ်လိုက်ပါApple နာရီ ဒီဇိုင်းအား လူအများအပြားသဘောကျနှစ်သက်မည့် စတိုင်မျိုးစုံဖြင့် တီထွင်ဖန်တီးထားပါသည်။ သင်သဘောကျသော နာရီ band နှင့် နာရီ မျက်နှာပြင်အား အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်မှာပါ။ အဓိက အကြောင်းအရာများDimensions: 38.6 x 33.3 x 10.5 mm (1.52 x 1.31 x 0.41 in)Build: Stainless SteelSIM: NoIPX7 certified - water resistant up to 1 meter and 30 minutesDisplay Type: AMOLED capacitive touchscreen, 16M colorsSize: 1.5 inches (~55.1% screen-to-body ratio)Resolution: 340 x 272 pixels (~290 ppi pixel density)Multitouch: YesProtection: Sapphire crystal glass3D Touch displayOS: watchOS 1.0, upgradable to v2.2Chipset: Apple S1CPU: 520 MHzGPU: PowerVR SGX543Card slot: NoInternal Storage 8 GB, 512 MB RAMAlert types: Vibration; RingtonesLoudspeaker: YesWLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/nBluetooth: v4.0, LEGPS: NoNFC: YesRadio: NoUSB: NoSensors: Accelerometer, gyro, heart rateMessaging: SMS(threaded view), Email, Push Mail, IMMP3 player, Photo viewer, Siri natural language commands and dictationNon-removable Li-Ion 205 mAh battery (0.78 Wh)Additional shipping fees will be charged.ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် iWatch (MJ2T2) Silver Aluminum Case with White Sport Band – 38mm SKUAP305EL07XYR4NAFAMZ မော်ဒယ်လ်I Watch 38mm (MJ2T2) Weight (kg)0.04 Display Size (inches)1.5 Internal Memory(GB)8 Operating SystemOther ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ပြီးအဆင်မပြေလျှင် ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပါသလား? ဤပစ္စည်းကို ၀ယ်ယူပြီး အဆင်မပြေမှု တစ်စုံတရာ ရှိပါက သင်လက်ခံရရှိသောနေ့မှ စ၍ ၇ရက်အတွင်း ပြန်လည် ပေးပို့ပြီး ငွေပြန်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။